Zeziphi iiNdima ezifunekayo kwiSebe lokuThengisa ngeDijithali namhlanje? | Martech Zone
Zeziphi iiNdima ezifunekayo kwiSebe lokuThengisa ngeDijithali namhlanje?
NgoMgqibelo, Agasti 31, 2019 NgoMgqibelo, Agasti 31, 2019 Douglas Karr
Abanye babathengi bam, ndilawula zonke iitalente eziyimfuneko kwimizamo yabo yentengiso yedijithali. Kwabanye, banabasebenzi abancinci kwaye songeza izakhono eziyimfuneko. Kwabanye, baneqela elomeleleyo ngaphakathi ngaphakathi kwaye bafuna nje isikhokelo ngokubanzi kunye nembono yangaphandle yokubanceda bahlale benobuchule kunye nokuchonga izikhewu.
Ukuqala kwam inkampani yam, iinkokheli ezininzi kolu shishino zandicebisa ukuba ndigxilise ndenze indima ethile; Nangona kunjalo, umsantsa endiwubonileyo kwiinkampani ezininzi kukuba kunqabile ukuba babe neqela elilinganiselweyo kwaye kwavelisa izikhewu kwizicwangciso zabo ezingabonakaliyo. Oko kwakungathethi ukuba bayasilela nangayiphi na indlela, kwakuthetha ukuba abafikeleli kumandla abo apheleleyo ngeeasethi ababenazo.
Ngokoluvo lwam, ndiyakholelwa ukuba lonke ishishini kufuneka libe neqabane langaphandle kwimizamo yalo yentengiso yedijithali. Ngelixa ndi, ewe, ndicalile… kukho izizathu ezininzi:
Isixhobo seLayisensi -Ndinokufikelela kwizixhobo zeshishini endikwaziyo ngazo ukuhlawula iindleko zabaxumi. Oku kunokugcina inkampani inemali eninzi.
Gxi ninisa - Njengomthombo wangaphandle, ndinelungelo lokungazixhalabisi ngemisebenzi yenkampani, iintlanganiso, ezopolitiko, okanye (ixesha elininzi) kuthintelo lohlahlo-lwabiwo mali. Ndiqeshelwe ukulungisa ingxaki kwaye emva koko ndilandele oko ngokungagungqiyo- kunye nenkampani ehlawula ixabiso endilibonisayo endaweni yomvuzo onokuthi ungabinakho ukuvelisa.
Tyhila - Phantse yonke inkampani inenzuzo, ke ndiyakwazi ukugubungela izithuba kwizakhono xa abathengi bam benabasebenzi abajikayo. Kwaye phantse yonke imibutho inenzuzo!
Ubungcali beNiche -Iinkampani ezininzi azinakho ukuqesha izibonelelo kuyo yonke indima eyimfuneko, kodwa ndiyiphuhlisile inethiwekhi yezakhono kule minyaka kunye neenkokheli eziqinisekisiweyo. Oko kuthetha ukuba ndinokuzisa iindima eziyimfuneko njengoko kufuneka, ndisebenzisa uhlahlo-lwabiwo mali kwaye ndizise iintshatsheli eziyinyani ezonyusa amathuba okuphumelela.
Ubungcali obanzi Ngokusebenza kumashishini onke kunye nokuhlala ngaphezulu kweendlela zeshishini, ndizisa izisombululo kubathengi bam. Ukuba sivavanya isicwangciso okanye iqonga kwinkampani enye kwaye isebenza kakuhle, ndiyizisa kubo bonke abathengi bam kwaye ndiyiphumeze ngobunzima obuncinci kunokuba umthengi ekwenzile yedwa.
Le infographic evela kwi-Spiralytics, Uyenza njani iQela lakho lokuThengisa ngeDijithali, iinkcukacha zeendima ezili-13 eziyimfuneko ukuze iqela lokuthengisa ledijithali lale mihla liphumelele.
Imisebenzi yeSebe lokuThengisa ngeDigital:
UMphathi weNtengiso or Umlawuli weprojekt - ukongamela iiprojekthi kunye nokuqinisekisa ukuba iqela lisebenza ngokukuko.
UMlawuli oLungileyo or Umenzi mizobo -Ukugcina ukungaguquguquki okubonakalayo konxibelelwano lophawu ngamajelo edijithali.
ababhekisi -Ukudityaniswa kunye nezinto ezisebenzisanayo ziyimfuneko kuyo yonke imibutho kule mihla, ke ukuba neqela elilungiselelwe ukwakha isiphelo esiqinileyo esinamava omsebenzisi kwindawo ephambili ngaphambili.
Umhlalutyi weNtengiso yeDijithali -Kuyimfuneko ukuba lonke iqela lentengiso yedijithali lineendlela ezicwangcisiweyo zokulinganisa ifuthe lazo kunye nengxelo esebenzayo eya kuthi incede ubunkokeli kunye neqela ukuba liqonde iziphumo.
IQhinga lokuThengisa ngeDijithali -Lonke inyathelo kufuneka lincedise ekuqhubeni izalathi zentsebenzo eziphambili kunye neenjongo zombutho. Isicwangciso esiliqili siyazidibanisa ezi ziqwenga kunye kwaye siqinisekisa ukuba onke amajelo, imimoya, kunye nemithombo yeendaba zixhotyisiwe ngokupheleleyo.
Umphathi we-SEO okanye ingcali Iinjini zokukhangela ziyaqhubeka ukukhokela onke amajelo ngomsebenzisi ngenjongo ukuphanda isigqibo sokuthenga. Amaqonga okukhangela izinto eziphilayo anika ulwazi oluninzi anokulisebenzisa kumaqela wentengiso yedijithali kunye nejelo elingena ngaphakathi lokuqhuba. Ukuba nomntu oqhuba ezi ndlela zokuchitha iindleko kunyanzelekile kuyo yonke imibutho.
Khangela iNgcali yeNtengiso -Ngethuba uphando lwezinto eziphilayo ludinga umfutho kunye negunya lokukhokelela kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela, intengiso inokugcwalisa isikhewu sokuqhubela phambili. Akunakho ngaphandle kweendleko kunye nobuchule, nangona kunjalo. Ukuthenga iintengiso kunokuba yimpazamo eyoyikekayo nebizayo ukuba awunabo ubuchwephesha.
Bonisa iNgcali yeNtengiso -Zikhona ezinye iisayithi ezizezakho kubaphulaphuli ozama ukufikelela kubo, ke intengiso kwezi ndawo ukuqhuba ulwazi, ukubandakanyeka kunye nokuguqula sisicwangciso esomeleleyo. Nangona kunjalo, inani lamaqonga entengiso, ukujolisa kubuchule, iintlobo zentengiso, kunye nokuvavanywa kwezinto eziguquguqukayo akukho nto imfutshane kwisayensi. Ukwenza umntu akhulise ifuthe lentengiso yakho kufuneka.
Umphathi wezeMidiya yoLuntu okanye ingcali Imithombo yeendaba kwezentlalo iyaqhubeka nokuba sisixhobo sokuzibandakanya nabathengi bakho kunye nejelo elikhulu lokuphuhlisa igunya lakho lophawu lomntu okanye lobungcali. Ukuba nomntu ophandayo, abeke iliso, kwaye akhule ekuhlaleni ngokuxhasa, ngenkxaso kunye nolwazi sisicwangciso esomeleleyo sayo nayiphi na into yanamhlanje.
Amava omsebenzisi or Umyili we-interface yomsebenzisi -Ngaphambi kokuba umphuhlisi wangaphambili abe nekhowudi yamava, kufuneka iphuhliswe kwaye ivavanywe ngokupheleleyo ukunciphisa uxinzelelo kunye nokuphucula ulwaneliseko lwabathengi. Ukuba nomntu oqondayo uyilo lwekhompyuter yomntu lutyalo-mali oluyimfuneko xa usenza loo mava.
Umbhali -Iimpapasho ezimhlophe, iimeko zokusebenzisa, amanqaku, iiposti zebhlog, kunye nokuhlaziywa kwemithombo yeendaba zentlalo kufuna ababhali abanetalente abanokubonisa ngokupheleleyo ithoni, ubuntu kunye nolwazi ozama ukusasaza. Ukuba nombhali kubasebenzi kunokuba yinto entle kubaninzi… kodwa kubalulekile ukuba ufuna utyalomali kumxholo wakho ube nefuthe.
Ummeli we-imeyile - Ukusuka ekuhanjisweni, ukuya kumxholo wesifundo, kuyilo lomxholo… i-imeyile sisixhobo esikhethekileyo sonxibelelwano esidinga italente kunye nobuchule bokufumana iziphumo. Iibhokisi zethu zebhokisi engenayo zigcwele kule mihla, ke ukufumana ababhalisi ukuvula kunye nokucofa ngumceli mngeni.
Ingcali yokuThengisa uMxholo okanye iStrategist - Zithini izihloko ezifunwa ngabathengi bakho kunye nabathengi? Ngaba ithala leencwadi lomxholo owuvelisayo likhangeleka njani? Umxholo weqhinga lokuthengisa unceda ukubeka phambili kunye nokuchonga izihloko eziza kuhlaziya… kunye nokuqinisekisa ukuba uhlala uyintloko kukhuphiswano lwakho.
Nantsi i-infographic epheleleyo:
tags: intengiso yedijithaliukuthengiswa kwedathaizikhundla zentengiso yedijithaliIindima zentengiso yedijithaliIqela lentengiso yedijithaliizihloko zentengiso yedijithaliumenzi mizobouphando lwezentengisoumphathi we seoingcali kwimidiya yoluntu
Ungazikhetha njani ezona Ndlela ziBalaseleyo kwiSicwangciso sakho seNkxaso yabaThengi
Unxibelelwano lweXesha langempela: Yintoni iWebRTC?